युवालाई मत किन ? | Citizen Post News
छि ! यो बेला नवस घरमा निस्क आलस्य फाली !
हे तन्नेरी उठन पृथिवी तीन वित्ता उचाली !! राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे ।
संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने २००७ सालदेखिको नेपालीको सपना पुरा भई नयाँ संघीय संरचना अनुसार हुन लागेको यस पटकको चुनाव नेपालीको समृद्धि र शान्तिको सपनासँग जोडिएर उन्नत समाजको परिकल्पनामा आधारित छ । यो चुनावमा पहिलो पटक उम्मेदवार भएकादेखि देशको नेतृत्व अनेक पटक गरिसकेका समेत एकै लाइनमा चुनावको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । नयाँ संविधान घोषणा पछिको पहिलो केन्द्रीय संसद र देशमा पहिलोपल्ट प्रदेश सभाको चुनावका कारण पनि यसको महत्व र उपादेयता अझ बढी छ । हामीले लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान दिएर आजको यो ब्यवस्थालाई प्राप्त गरेका हौ । हाम्रो त्याग र सहिदको बलिदान स्वरुप प्राप्त यो व्यवस्था जीवन्त जनमुखी र प्रगति उन्मुख नभए हामीलाई फेरि सन्ततिले गर्नुपर्ने त्याग र संघर्षले चिमोट्नेछ, जसरी हाम्रा युवा पुस्ताका साथीहरु सुन्दर भविष्यको आसमा परिवार छोडी विदेशीदा आमाबाबुको मन कुँडुल्किन्छ । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरी समुन्नत नव नेपाल निर्माणको लागि र भविष्यको मुस्कानको लागि पनि यस पटकको केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा विवेकयुक्त हस्तक्षेपकारी भुमिका युवाहरुबाट हुनैपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
हामीले राजनीतिमा सधै पाकोपन खोजौं, गल्तीदेखि सारै डरायौ, कतै ठेसै नलागोस्, कहिलै नलडियोस् भन्ठान्यौं, तर क्रिया भने खोजिरह्यौ । हो आजसम्म गलत यही रह्यो, गल्ति नहोस् भनेर कामै छोडिदियौं, ठेसको डरले बामेचाल्ने कोशिसै गरेनौं, हामी यति परिपक्व भयौ कि काम नहुदै त्यसका सारा गुणदोष परख्न थाल्यौं । फलतः हाम्रा सारा उर्जा गोडा चाल्नमै खर्च भयो नकि अगाडि बढ्न । युवा भविष्य हो तर भविष्यको चिन्ता होइन, भविष्यको सुन्दर वा विद्रुप नेपालको भोक्ता हो अतीतको त्रास होइन, अगाडि बढ्ने चाहले ऊ कहिले लड्छ, थेचारिन्छ र पनि मुस्कुराउँदै बढिरहन्छ । युवाको युवत्व यदि यो चुनावमा हामी युवानै मिलेर नबचाउँने हो भने हामी पनि तयार भए हुन्छ छोरालाई कतार पठाउन र दहि अक्षता मुस्न अनि छोरीलाई पढाएर सम्भ्रान्त कुलीन कुलमा बुहारीका नाममा भाँडा माझ्न पठाउन । आजको एक्काइसौं शताब्दीको युबा अब आफ्नो र आउने सन्ततिको सम्पन्नताको खातिर पनि विवेकवान् भएर चुनावको माध्यमद्वारा अग्रपंक्तिमा आउनै पर्दछ र सोही बमोजिम कार्य गर्न निर्वाचनमा जुट्नु पर्ने देखिन्छ । युवालाई कुनै पाको नेतृत्वको पछाडि नभै पाकोपन यदि युवाको पछाडि लाउन सकियो भने युवाको उर्जाले देश बामेसर्दै विकासको बाटोमा गोरेटो बनाउँदै दौडन थाल्दछ ।
राजनैतिक दर्शन सबैका राम्रा छन् तर कार्यान्वयन प्रतिको चाह न्युनतम पनि छैन । आजसम्म हाम्रोमा भएका प्रगति न कुनै वाद न त कुनै सिद्धान्तकै आडमा भएका छन् । नवीन सोच र समयको हुरीले हामीलाई यहाँसम्म ल्याएकोछ । अब पनि हामीले यो हुरीलाई आफ्नो चाह अनुसार बहकाउन सकेनौं भने विकासका नाममा विनासमात्र भित्रिनेछ । अझै हामी हाम्रा विकासका चाहनालाई अमुक दल वा अमुक व्यक्तिले साकार पारिदिने चाहनामा थपडी बजाउने कार्यकर्ता मात्र बन्न खोज्यौं भने हाम्रो भविष्यको त्रासदी हाम्रै अघिल्लो पुस्ताका झै हुनेछ । अघिल्लो पुस्तामा नैतिकता थियो तर आजको जसरी विश्वपरिवेश बुझ्न सक्ने श्रोत, साधन र युगीन ज्ञान थिएन, राजनीति सबैको र म सबैको भन्नसक्ने सामर्थ्य थिएन । आज भूकम्पले घर ढल्दा विश्व सहयोग गर्न तयार हुन्छ, अर्बौ रकम प्राप्त हुन्छ तर पनि तीन बर्षका हिउँद र वर्षा कट्दा पनि अझै कति वटा जाडो र झरीले सेकिनु पर्ने हो । कति शिशु र वृद्धवृद्धाको प्राण जानेहो अनिश्चित छ । यस्ता कार्यमा जवसम्म युवा सहभागिता र नेतृत्व हुदैन तवसम्म धेरै सोचेर गलफत्ति गर्ने अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई निराशा बाहेक केही दिने छैनन् ।
युवा नेताको खाँचो:
बेफिक्रिको कार्यशैली मात्र युवामा हुन्छ, आज देश र प्रदेशस्तरमा धेरै घोत्लिने नेता होइन, तत्काल देखिएका समस्या समाधान बेफिक्रि शैलीमा भूत र भविष्यसँग नडराई गर्ने युवा नेताको खाँचो छ । समस्या कुनै पनि ठूला हुँदैनन् तर त्यही समस्या चर्चा गर्न थालेपछि विशाल देखिन्छ, त्यसैले समस्याको बीजारोपण हुँदै समाधानको तरवार चलाउने ऊर्जावान् नेतृत्वको अपरिहार्यता छ । अकर्मण्यता युवामा हुँदैन, लामो धैर्यताको पाठ उसलाई मन पर्दैन । पञ्चले पनि धैर्य गर विकास हुँदैछ भन्थे, हाम्रा राजनैतिक अगुवाहरु पनि उन्नति भनेको रातौँरात हुँदैन्, फेरी एकपटक मौका देऊ भन्दैछन् । तर उनीहरुकै अगाडि सिङ्गापुर र मलेसिया कायापलट भएको कथा हामीले सुन्दैछौं । हाम्रा अगुवाले यति दुस्ख भोगे कि आज हामीले भोग्न परेको पीडा र छट्पटिले त्यो मनलाई कहिलै छुदैन। सवैले युगीन समयलाई भोग्ने हो, त्यो समय विचार उदयको समय थियो, अध्यारो व्यवस्था ढल्दै उज्यालोको जन्म हुने युग थियो । त्यसैलै कष्ट धेरै भोग्नु पर्यो, प्रतिक्षा धेरै गर्नु पर्यो ।
आजको समय विश्व साँघुरिएको छ, चन्द्रमामा वस्ति बसाल्ने युगमा भूकम्प पीडितलाई टीनको छाना मुनि पनि राख्न नसक्ने हैसियतको हामी बन्नु परेको छ । जोगी बन्न राजनीति नगरेको भन्ने नेतृत्वले आजको सिँगै पुस्तालाई विक्षिप्त र अवसर वञ्चित गराउन पनि पक्कै राजनीति नगरेको हुनुपर्ने हो । त्यसैले आदिम सभ्यतालाई हटाई तत्कालीन युगीन चेतना विकास गरेका नेतृत्वले मेरै युगमा बाँच भन्न किमार्थ सुहाउँदैन् । जसरी अघिल्लो पुस्ताको विचारमा हस्तक्षेप गरी नेतृत्वले आफ्नो पुस्ताको विचार स्थापित गर्यो । त्यसैगरी अहिलेका युवापुस्ताले पनि आफ्नो विचार र युग ल्याउन नेतृतवमाथि हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सवैभन्दा उत्तम र सशक्त माध्यम भनेकै यही चुनावमा युवाले युवालाई साथ दिई चुन्नु हो ।
जनताको काम गर्न सवैभन्दा योग्य प्रतिनिधि भनेको युवा नै हो, मलामी अड्डा, अदालत, नापी, विवाह सवैमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको साथ खोज्छन् । प्रत्येक घरधुरीले आफ्नो पारिवारिक सदस्यकै रुपमा नेतृत्वबाट भूमिका खोज्छन् । ती सम्पूर्ण जनचाहनालाई शारीरिक र मानसिक रुपले सम्बोधन युवाबाट मात्रै सम्भव छ । अघिल्लो पुस्तालाई उच्च सम्मान गर्दै, संशयस्थलमा सल्लाह लिदै आजको नेतृत्व युवाले लिनु पर्दछ । हामीलाई हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले चालीस कटेसी रमाउने सपना देख्न सक्ने बनायो । अब हामीले हाम्रा पछिल्ला पिँडीलाई सधै रमाउन सक्ने यथार्थ धरातल दिनुछ, हामीलाई यो चेतनास्तरसम्म ल्याएकोमा कृतज्ञ अघिल्लो पुस्तासँग हुनुपर्छ । तर विश्वको परिवर्तनसँगको सहयात्री आउने पुस्तालाई आजका युवाले गराउन सक्नुपर्छ ।
युवाको ऊर्जा नै युवत्वः
युवाको ऊर्जा नै युवत्व हो । आजको पाको पुस्ताले युवत्वको आशमा र नेतृत्व आफुभन्दा क्षमतावान पात्रमा हस्तान्तरण गर्न चाहनु पर्दछ । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको लगभग यो तीस बर्ष अवधि पाकाको राजनीति र कार्यकुशला हामीले नियालि सकेका छौं । जति प्राप्त भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिऊं । अब उहाँहरुले हामीलाई दिएको शिक्षा र मायाको नतिजा देखाउने समय आइसकेको छ । राजनीति र सिद्धान्त जीवनभन्दा ठूला किमार्थ हुन सक्दैनन्, त्यसैले यस पटकको चुनावमा पार्टी भुलेर जीवन रोजौ र बहुसंख्यक युवा मिलेर युवाकै नेतृत्व निर्माणको पहल कदमीमा जुटौं । चालीस कटेसी रमाउने हैन, सधै परिवारसँगै बसेर रमाउन सक्ने देश बनाऔ । दही, अक्षताको टीकाले छोरालाई आमाबाबुको काखवाट विदा गर्नुपर्ने युगको अन्त्य गरौं । तस्बिरमा लेखकः सञ्जु घिमिरे Email:gssanjeeb@gmail.com